modernist poetry | လမ်းအိုလေး
ဘိန်းစားနဲ့ ကဗျာဆရာ (ခင်ဇော်မြင့်)
(Mandalay Icon Magazine – 2013)
Categories: Kabyarz | Tags: 21 Poems Khin Zaw Myint, ခင်ဇော်မြင့်, Kabyarz, Khin Zaw Myint, lanolay, modernist poetry | Permalink.
ပလိန်းကိတ်ရဲ့ အရသာ (ခင်ဇော်မြင့်)
ကမ္ဘာနှင့်အမျှပွင့်သော ပန်းရနံ့တို့ စွဲတယ်
Categories: Kabyarz | Tags: ခင်ဇော်မြင့်, Kabyarz, Khin Zaw Myint, lanolay, modernist poetry | Permalink.
ဗစ်ဂင်ရှတိုင်းန်နဲ့ သီသီလေးလွဲသွားတဲ့ ကိုအောင်ဝင်း (ဇေယျာလင်း)
“နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူနေခဲ့ကြ” တဲ့အနက်ဟာ ဘယ်မှာဘာအရောင်လဲ။
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ဟာ နာကျင်ရတဲ့ဘာသာစကားသက်သေခံပစ္စည်းတွေပဲ။
အဲ့ဒါကို ထပ်ဝန်းရံဖို့ လိုသလားဆီ ဦးတည်တော့
သူသေပြီ မနက်လင်းအား မှိန်မှိန်မှာ ကျောက်ပန်းတောင်းမှာ။
မဖြစ်လာသေးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို “လင်ဂွစ္စတစ်က် အနဲလဆစ္စ” လုပ်ဖို့
နောက်မျိုးဆက်လည်း စိတ်ကူးခဲ့တာ အလင်းအားနည်းတဲ့ ဘာသာစကားတစ်နေရာ
မှော်တွေဝင်ခိုနေတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေ ကြွေတစ်ချို့ ဝေတစ်ချို့ ပြိုင်းပြိုင်းအရပ်မှာ
ကျွန်တော်တို့ တစ်ထစ်ချ ယုံကြည်ခဲ့ကြသလား။ ကြယ်ရည်တွေလို မသေချာ။
သူ့အမှတ်ရမှုတွေကို ဘယ်လိုစကားလွဲချော်မှုတွေထဲ စိမ့်ခဲ့သလဲ။
မှတ်မိပါသေးတယ် သူနဲ့ စကားပြောရတာ တစ်ခါတစ်ခါ မပွင့်တဲ့
လေထီးကြိုးဆွဲပြီး မော့ချလိုက်တာပဲ … ကမ္ဘာကြီးဟာ…
မပြီးဆုံးဝါကျတွေ အများကြီးနဲ့ အစချီထားတာ ဆိုတော့ကာ။
Categories: Kabyarz | Tags: ဇေယျာလင်း, Kabyarz, modernist poetry, Zeyar Lynn | Permalink.
အသက် ၅ဝ ပြည့်တော့ လူဟာ နည်းနည်းတုန်လှုပ်ပြီး အံ့အားတသင့် ဖြစ်မိတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ကိုယ့်လမ်းကြောင်း ကိုယ်ပြန်ကြည့်ရာက ‘တောလား’ ကို ရေးခဲ့နိုင်တယ်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာပေါ့။ တိုက်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ ‘ဖော်ဝေးကွယ်လွန်ခြင်း နှစ် ၂ဝ ပြည့်’နှစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ‘သေခြင်း’ နဲ့ ‘ရှင်ခြင်း’ ဟာ ယှဉ်လျက်သားပဲ။ ဒါကြောင့် ဖော်ဝေးကွယ်လွန်ခြင်းကို ထည့်ရည်ညွှန်းခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီကနေ ၁ဝ နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ပြန်ဖတ်တော့ နှစ် ၅ဝ ဆိုတာကြီးကို ကျွန်တော် အံ့အားသင့်တုန်းပဲ။ ရာစုရဲ့ ထက်ဝက် မဟုတ်လား။ အဲ့ဒါဟာ ‘တောလား’ ကို ထုတ်ဝေဖို့ ပြန်လည်နိုးကြားစေတဲ့ အဓိက အကြောင်းပါပဲ။
သမိုင်း မဟုတ်ဘူး ရာဇဝင် မဟုတ်ဘူး ဒီစာအုပ်ကို ကဗျာဖတ်သူ ဖတ်တဲ့အခါ ‘ရုပ်ရှင်ကား တစ်ကားလောက် ကြည့်ရတဲ့ သဘောပဲ’ ဟူပါက ကျွန်တော့်ဘက်ကလည်း သဘောတူလိုပါတယ်။ အနုပညာပြုလုပ်မှုမျှသာ။
အဲ့ဒါ ကျွန်တော့် နှစ်ငါးဆယ်။ အဲ့ဒါ ကျွန်တော့် တောလား။
Categories: Kabyarz | Tags: Aung Cheimt, တောလား, အောင်ချိမ့်, Kabyarz, modernist poetry | Permalink.
Categories: Kabyarz | Tags: တာရာမင်းဝေ, Kabyarz, lanolay, modernist poetry, TYMW | Permalink.
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုမှာ အလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြော (မိုးဝေး)
ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပါလားလို့ ပုံသေ သတ်မှတ်လို
အချိန် နှောင်း မနှောင်း
အဖွဲ့အနွဲ့ ကောင်းသူလက်ထဲက လက်ဖွဲ့
“ငါ ဆိုတာ ပျင်းစရာ ဘုံကြီးပါ” ပုံပါ တီရှပ်နဲ့ ဟို ကတုံး (ခေါင်းတုံး)
ပြတင်းပေါက် တစ်ခုဟာ အမြဲနာကျင်နေပါတယ်
ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ကဗျာတွေ ရေးချင်ပါတယ် တေးများ ကို သတိရ
လမ်းပေါ်ရောက်ရောက်ချင်း ချုပ်ရိုးပေါ်က ကန်ကန်ထွက်မိတဲ့
အဟာရ နွားနို့ သူ့ဖို့ချည်းပဲ ဆိုတဲ့ ဈေးမှုဗေဒ စကားကျမ်းအဖွင့်
စပယ်ပန်းတိုင်း မွှေးသလား ဟေ့လူ
ဘယ်နေ့ကို ဒီနေ့ လို့ပြောမလဲ
မမြဲခြင်းကို လိုက်ဖမ်းနေတဲ့ ဟို စမတ်ကျကျ လူရော
သူ့နာမည် ပြန်ပြန်မေးနေတာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆိုင်မဆိုင်
Categories: Kabyarz | Tags: မိုးဝေး, Kabyarz, lanolay, modernist poetry, moe way | Permalink.
မိုးသားများထဲ အသားကျ နေထိုင်
ငယ်သူအိပ်မက် အိမ်က ထွက်ခဲ့
မိုးသားများ အသားကျ လွင့်မျော
ပွင့်ချပါလျက် အပွင့်ခက်သည့် ခေတ်
သူဌေးကလေ သမီးကို အမြဲတမ်း ခေါ်တယ်
ဟောဒီပိုးသားဆူးကလေးဟာ သမီးဘ၀ရဲ့ သရဖူပေါ့။
သမီးသာ အိပ်မက်တိုင်း ဖောက်လို့ရတဲ့ လမ်း
သမီးတို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းရဲ့
ကုန်ချောဟာလည်း ကဲ . . . ကြည့် မချောဘူးလား
ပေါက်ကွဲဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေတဲ့ ဗုံး
ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့သူတွေက ပြောတယ်
သူတို့ ပြောတာ သူတို့နယ်ပယ်က စကားပေါ့
ကုမ္ပဏီမှာတော့ သမီးဟာ အလင်းလက်ဆုံး
(ပေဖူးလွှာ၊ မတ် – ၂၀၁၀)
Categories: Kabyarz | Tags: ခရမ်းပြာထက်လူ, Kabyarz, KYPHL, modernist poetry | Permalink.
ဗမာပြည်မှာ ဇန်န၀ါရီလ ဆောင်းညပေါ့
ဥပမာ-တစ်နေ့လုံး ဘယ်သွားခဲ့မှန်းလည်း မသိဘူး
Categories: Kabyarz | Tags: မိုးဝေး, သူပဲအကြမ်း သူပဲအချော, Kabyarz, lanolay, modernist poetry, moe way | Permalink.
ထိုင်နေတယ်၊ ဘာမှဖြစ်မလာလည်း ထိုင်နေတယ်
ဖြစ်လာလည်း ထိုင်နေတယ် ထိုင်နေတယ်အနည်ထိုင်သလို
ပင်လယ်ကြမ်းပြင်အောက် ပစ်ကျသွားသလို ထိုင်နေပေါ့
ဝေါ့ထရိတ်စင်တာကြီး ပြိုမကျခင် အခန်းထဲ
ဘုရားသခင်နဲ့ နှစ်ယောက်ချင်း ခေါင်းချင်းဆိုင်သလို ထိုင်နေပေါ့
ဘဲငန်းတွေက ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ် ရေအိုင်မှာဝဲလည်လို့
ထိုင်နေတယ် ငါဟာ ကျွန်တော်ဟာ
ခုန်ထလို့ မရတော့တဲ့ ခုံတစ်ခုံပေါ် ရှုခင်းကို
ကသိုဏ်း ၁၀ပါးထဲက လူသေကသိုဏ်းရှုသလို ရှုစားရင်း
ပစ်ချလို့မရအောင် လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ Continue reading →
Categories: Kabyarz | Tags: ခရမ်းပြာထက်လူ, နံရံမှာ ငါရေးထွင်း, Kabyarz, KYPHL, lanolay, modernist poetry | Permalink.